The nchoputa akụkọ - Hongbao Biotech Co., Ltd.
Full ụdịdị dị iche iche cbd mmanụ
The malitere si Akụkọ
The nchoputa akụkọ
Pan Zongbing na ya ulo oru hemp akụkọ
Na 1973, Macy Pan a mụrụ n'ezinụlọ ndị nkịtị na Zhejiang Province. Majoring na-arụ ụgbọ imewe, Pan tụbara onwe-ya nime R & D nke Medical na Beauty Instruments orú arọ. N'ihi ya undefeated agwa, ọ bụ mgbe niile ụtọ nke tackling ọrụaka nsogbu. Na 2008, n'otu oge, ọ mụtara banyere a ụdị osisi extracts (CBD) etinyere mma ụlọ ọrụ, nke nwere ike melite gbajiri akpụkpọ anụ ahụ. N'oge ahụ, ndị British ahịa nwere a na-eze ume na na e nwere a British ikikere ọkachamara-amụrụ ya fọrọ nke nta ka afọ 40, ka na-enweghị ike na-edozi nsogbu nke CBD ulo oru mmepụta na-adị ọcha. Imeri ọrụaka nsogbu ga-abụ ihe epoch-ọganihu. Dị ka a technology aficionado, Macy Pan malitere nnyocha ya.
Ọ bịara Yunnan chọta ụzọ. Na mkpebi siri ike imeri oru ihe isi ike. N'oge ahụ Ndokwa na cultivation na nhazi nke ulo oru hemp na Yunnan e dị eti iwu, na-eme ndị cultivation nke ulo oru hemp n'ime iwu akporo. Pan ji ihe karịrị nde 20 melite R & D laboratories na malite ịmụ quantitative mmịpụta nke cannabinoid.
Mgbe afọ atọ gasịrị, na Nov 2013, otu nwere na-ezute ngo nkwụsị n'ihi na ụkọ oru ngo ego. Pan kpebisiri ike imeri ọrụaka nsogbu nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ ọkachamara na-enweghị ike idozi kemgbe 1980s. Ọ hazigharịrị otu. Otu ndị mmadụ, mmadụ abụọ, atọ ndị mmadụ, mmadụ ise ...... ndị otu na-ịgbasa. N'oge ahụ, ha chere ihu ụlọ, mmiri, na ọkụ eletrik na egwu nkwukọrịta nsogbu. Pan malitere relearn molekụla usoro, molekụla ibu na na-na na na na onye. Ọ gbara afọ iri anọ mgbe ahụ.
Ọ dịghị onye maara ma na nnwale ga-aga nke ọma na quantitative CBD mmepụta. Mgbe niile, n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ụwa nwere ihe ịga nke ọma na-emepe emepe ya ọgu arọ abua. Otú ọ dị, Pan daghị mbà. N'ikpeazụ, Site unremitting mgbalị, ọ groped si mgbe ihe nakawa etu esi na n'oge 2014 mgbe ọtụtụ ụbọchị, ehihie na abalị na ọtụtụ iri puku ndị nwere. Pan ghọtara ulo oru na mmepụta nke 100% ifịk ndu mmịpụta nke 95% elu-adị ọcha CBD. Ọ tọrọ ntọala Yuxi Hongbao Biotechnology Co., Ltd. na patented usoro a nke mmịpụta nke bụ ụwa mbụ na ndị na zuru ezu akara nke mmịpụta technology, na 100% onwe ha nwere ọgụgụ isi ihe onwunwe mmepụta akara ghọrọ a ịga nke ọma.
Nke a CBD wepụ crystal ndị dị ka oké ọnụ ahịa dị ka gold na pharmaceuticals ụlọ ọrụ. Ọ bụ ịrụ ọrụ nke ọma n'ịgwọ apịajighị apịaji, na-ebelata mbufụt, na-agwa okwu nchegbu na rụọ agụụ, àkwụkwụ, ụbụrụ etuto wdg
N'otu oge ahụ, ndị nnyocha nweta e mma site Yunnan ọgwụ ọjọọ Division. Ha na-etinye na-atụ aro maka izu okè na agbala China mbụ ulo oru hemp nhazi ikike. CBD nwere ike n'ụzọ iwu kwadoro na-emepụta.
Na Oct 2015, mbụ ogbe nke 100kg CBD na ihe karịrị 95% na-adị ọcha nke ọma exported ka mba ọzọ, na gafere ule na UK, Germany na ndị ọzọ na ikikere laboratories. Nke ahụ pụtara ụwa ulo oru efu mmepụta nke CBD-e tiwara na China. Pan ama okpono dị ka onye mbụ wepụ ulo oru hemp site na ụlọ ọrụ. Mgbe ọ nụrụ ozi ọma, na British Dr. Kate, na-eme nnyocha CBD fọrọ nke nta ka afọ iri anọ, kpọrọ Pan agụmakwụkwọ mgbanwe.
Ugbu a, Pan na-akwadebe a abụọ mmepụta akara, ọzọ pụrụ iche akara. Ọ na-eme atụmatụ iji melite akuku ụlọ ọrụ na-aghọta organic osisi ke spektral greenhouses na laabu ịzụlite ọzọ ngwaahịa.
Mgbe dị iche iche na ihe isi ike, ọ akpatre ibu anwụ na-acha ụbọchị. Pan gosiri obi ike na anyị nwere ụwa-klas technology na ekwe ahịa, ma na akuku, mmịpụta, ma ọ bụ na R & D, ahịa, na ika.
Na CBD development tide, Macy Pan na ndi otu ya ga-anọgide na-agba na.
High Ọcha CBD anọrọ Professional Manufacturer
Adress: Jinshui ebe, Dahua ulo oru ogige, Yuxi obodo, Yunnan n'ógbè, China